TelePrompter: Onye Ọkachamara Gị Ntanetị Teleprompter | Martech Zone
Ọtụtụ mgbe m na-ekwu okwu, ọ na-amasị m ikwu okwu nke ọma ma nwee nnukwu visuals n'oge niile m na-ekwu okwu. N'ụzọ dị otú a, m dị ka ihe dị mma na m nwere ike ilekwasị anya na nnabata okwu ahụ site na ndị na-ege ntị karịa okwu dị na ihuenyo. Agbanyeghị, enwere oge - dị ka vidiyo Youtube - ebe m nwere obere oge ma chọọ ide edemede.
Gafe okwu ndị dị na akwụkwọ ma na-akụda ụdị font ka ọ bụrụ nke a na-ahụ anya bụ otu ụzọ isi adịgboroja inwe teleprompter. N'ezie, ịpịgharị na idobe ebe gị bụ ihe mgbu na isi. Afọ ole na ole gara aga, anyị keere ngwaọrụ Desktọpụ ProPrompter, nke na-enye gị ohere ilebanye anya na igwefoto weebụ gị mgbe ị na-edekọ.
Mgbe ProPrompter na-enye ngwa teleprompter nke ya, enwere uzo ozo di ugbu a na ntanetị. Teleprompter nwere sọftụwia dị ka ngwa Ọrụ na ntanetị ebe ị nwere ike bulite edemede gị (ma ọ bụ edemede maka ọtụtụ mmadụ), tinye oge ezumike, yana ọbụlagodi onyonyo. Can nwere ike ime ihe a niile n'efu, ma ọ bụ dowe ederede gị dị ka akụkụ nke ndenye aha.
TelePromptor na-akụziri gị otu esi ekwu okwu dị ka onye ọkachamara, na-eji teknụzụ na-echere patent kwadoro site na ya okwu iri. N'iji usoro olu okwu ogologo oge, ị nwere ike ịdị ka nke ọma! Alojado na igwe ojii, TelePromptor bụ a ọkachamara teleprompting ngwa nwere njirimara ọrụ dị ọcha, nke e mere iji nweta onye ọ bụla chọrọ ịgụ edemede n'ime igwefoto.
TelePrompter Onye editọ
Ihe ndozi ederede na-akọwa onwe ya, na-enye ike ịgbakwunye ihe oyiyi, setịpụ ndị na-ekwu okwu, ma dozie nkwụsị.
N'ime ihuenyo ihuenyo, ị nwere ike ịnweta edemede gị yana usoro iheomume zuru ezu. N'elu elu bụ ogwe ọganihu maka edemede gị na nkwụsịtụ akọwapụtara nke ọma na B. Ọnụọgụ na agba ndị metụtara ya bụ maka ịhazi ndị okwu dị iche iche. Naanị bulite edemede gị, setịpụ oge ezumike gị maka iku ume ma ọ bụ kwụsịtụ, ma pụọ!
Ebe ọ bụ na teleprompter na-anabata ma kpọọ ya n'ime ihe nchọgharị, enwere ike ịkpọ ya na ọnọdụ ngosi zuru oke na ngwaọrụ ọ bụla - desktọọpụ, mbadamba ma ọ bụ mobile.
Tags: Nzukọ Ahịa n'Onlinentanetekwentị teleprompterokwu teleprompterokwuteleprompterngwa telepromptertelepromptingteleprompting ngwa